Izinqolobane ze-IARC - Ilungelo Lase-US Lokwazi
Inkantolo yokudlulisa amacala ilalela izimpikiswano ngokulahleka kwecala lokuqala kukaMonsanto
Isinqumo sejaji laseCalifornia esola umuthi wokubulala ukhula waseMonsanto ngesifo somdlavuza wasesikoleni saba nephutha kakhulu futhi asihambisani nomthetho, ummeli waseMonsanto utshele iphaneli lamajaji okudluliswa kwamacala ngoLwesibili.
Imithi yokubulala ukhula yenkampani esekwe eglyphosate - edume kakhulu ngokuthi yiRoundup - isekelwa ngokugcwele yi-Environmental Protection Agency (EPA) kanye "nabalawuli emhlabeni jikelele," kusho ummeli uDavid Axelrad etshela amajaji neNkantolo Yokudlulisa Amacala yaseCalifornia Isifunda Sokuqala Sokudlulisa Amacala.
U-Axelrad uthe iMonsanto ayinaso isibopho sokuxwayisa noma ngubani ngengozi yomdlavuza okusolakala ukuthi inengcuphe yokunikwa umdlavuza uma kunesivumelwano esivumelanayo sokuthi ababulali balo babephephile.
“Empeleni akulungile ukubamba iMonsanto icala nokuyijezisela ilebula lomkhiqizo elingakhombisi ngokunembile ukuzimisela kwe-EPA kuphela kodwa nokuvumelana komhlaba wonke ukuthi i-glyphosate ayiyona eyomdlavuza,” kusho yena ekulaleleni kwehora lonke. Lokhu kuqhubeka kubanjwe ngocingo ngenxa yemikhawulo ye-COVID-19 ekufinyeleleni enkantolo.
U-Associate Justice uGabriel Sanchez ubuze ubuqiniso bale mpikiswano: "Unezifundo zezilwane… i-mechanism studies, unezifundo zokulawula amacala," esho, ekhuluma nommeli kaMonsanto. “Kunenqwaba yezifundo ezishicilelwe ezibuyekeziwe zontanga… eziphakamisa ubudlelwano obubalulekile phakathi kwe-glyphosate ne-lymphoma. Ngakho-ke angazi ukuthi ngivumelana nawe ukuthi kunokuvumelana ngazwi linye. Impela izinhlaka ezilawulayo zibonakala zisohlangothini olulodwa. Kepha kunobunye ubufakazi obuningi kokunye. ”
Isikhalazo sisuselwa esinqumweni sejaji sango-2018 e-San Francisco Superior Court esayalela uMonsanto ukuthi akhokhe u- $ 289 million ku-Dewayne “Lee” Johnson, kufaka phakathi ama-dollar ayizigidi ezingama-250 kumonakalo wokujeziswa.
Ijaji eliqulile icala likaJohnson lehlise umklomelo waba yizigidi ezingama- $ 78.5. Kepha iMonsanto wadlulisa isinqumo, ukucela inkantolo ukuthi iguqule isinqumo secala bese ifaka isinqumo seMonsanto noma ihlehlise futhi ibuyisele icala ecaleni elisha noma okungenani inciphise kakhulu umonakalo. UJohnson wadlulisa icala efuna ukubuyiselwa umklomelo ophelele wejaji.
UJohnson ungomunye wamashumi ezinkulungwane zabantu abavela e-United States abamangalele uMonsanto bethi i-Roundup namanye ama-herbicides asuselwa ku-glyphosate enziwe yinkampani enza i-non-Hodgkin lymphoma nokuthi inkampani yachitha amashumi eminyaka ihlanganisa izingozi.
UJohnson uthole isikhundla “sokuthandwa” ngoba odokotela bathe isikhathi sakhe sokuphila sifushane nokuthi kungenzeka afe kungakapheli izinyanga eziyi-18 kuqulwe icala. UJohnson ujabhise odokotela futhi usaqhubeka ephila futhi elashwa njalo.
Ukulahlekelwa kukaMonsanto kuJohnson kumake ukulahlekelwa kwecala lokuqala kweRoundup enkampanini, elatholwa yiBayer AG yaseJalimane ngoJuni 2018 njengoba kwaqala ukuqulwa kwecala likaJohnson.
Ijaji ecaleni likaJohnson lithole ngokukhethekile - phakathi kwezinye izinto - ukuthi iMonsanto ibinobudedengu ngokwehluleka ukuxwayisa uJohnson ngengozi yomdlavuza yokubulala ukhula kwayo. Kodwa uMonsanto uthi lesi sinqumo sasinephutha ngenxa yokungafakwa kobufakazi obubalulekile nalokho abameli benkampani abakubiza ngokuthi “ukuhlanekezelwa kwesayensi ethembekile.”
Uma inkantolo yokudlulisa amacala ingalaleli ukuqulwa kwecala elisha, uMonsanto ucele ukuthi okungenani amajaji anciphise ingxenye yomklomelo wamajaji "ngomonakalo ongekho kwezomnotho wangomuso" kusuka ku- $ 33 million kuya ku- $ 1.5 million nokusula umonakalo wokujeziswa ngokuphelele.
Abameli bakaJohnson babethi kufanele athole ama- $ 1 million ngonyaka ngezinhlungu nokuhlupheka kule minyaka engu-33 eyengeziwe abengayiphila ukube akazange awuthole umdlavuza.
Kepha abameli bakaMonsanto bathe uJohnson kufanele athole u- $ 1 million kuphela ngonyaka ngezinhlungu nokuhlupheka ngesikhathi sakhe sokuphila uqobo noma u- $ 1.5 million esikhathini esizayo sezinyanga eziyi-18 esilindelekile.
NgoLwesibili, u-Axelrad uphinde waliphinda lelo phuzu: "Impela ummangali angalulama ngesikhathi esaphila ngenxa yobuhlungu nokuhlupheka okungabangelwa ukwazi ukuthi usenesikhathi esifushane sokuphila," utshele iphaneli lezobulungiswa. "Kodwa ngeke ululame ngenxa yobuhlungu nokuhlupheka okungenzeka kwenzeke eminyakeni lapho uzobe ungasahlali khona futhi yilokho ummangali akuthola kuleli cala."
U-Axelrad utshele abahluleli ukuthi le nkampani ibipendwe ngamanga njengokuzibandakanya nokungaziphathi kahle kodwa empeleni ilandele isayensi nomthetho ngendlela efanele. Uthe, ngokwesibonelo, yize ummeli kaJohnson ayesole uMonsanto ngokubhala okuyizipoki amaphepha esayensi, ososayensi bezinkampani babenze "iziphakamiso zokuhlela" kuphela zamaphepha amaningi ashicilelwe ezincwadini zesayensi.
"Ukuthi iMonsanto ibingaba nokuqhamuka kakhulu ekuboneni ukubandakanyeka kwayo kulezo zifundo umongo wukuthi lezo zifundo azivelanga lwazi olungelona iqiniso noma oludukisayo futhi akukho okukhombisa ukuthi omunye wababhali balezo zifundo ubezoshintsha umbono wakhe ukube iMonsanto enganikelwanga ukuphawula komhleli, ”kusho yena.
U-Axelrad uthe abukho ububi futhi akukho sizathu somonakalo wokujeziselwa iMonsanto. Ukuvikela kwenkampani imishanguzo yokubulala ukhula yayo eglyphosate eminyakeni edlule "bekufanele futhi kuthembekile," esho.
“Abukho neze ubufakazi bokuthi iMonsanto isabalalise ulwazi olungelona iqiniso, oludukisayo noma olungaphelele, abukho ubufakazi bokuthi izenzo zalo zivimbele ukusatshalaliswa kolwazi ezinhlanganweni ezilawulayo ezidingekayo ukuze kubuyekezwe ubufakazi besayensi, abukho ubufakazi bokuthi izenzo zalo zaphazamisa isinqumo sokugcina futhi akukho bufakazi ukuthi iMonsanto yenqabile ukwenza isivivinyo noma isifundo ukuze kufihlwe ulwazi ngengozi yokulimala noma ukuvimbela ukutholakala kolwazi olusha mayelana nesayensi ye-glyphosate, ”kusho yena.
Ummeli kaJohnson uMike Miller uthe abameli bakaMonsanto bazama ukwenza inkantolo yokudluliswa kwamacala ukuthi izame futhi amaqiniso aleli cala, okungeyona indima yalo.
“IMonsanto ayiwuqondi kahle umsebenzi wokudluliswa kwamacala. Akukona ukuphinda ucabangele amaqiniso. Amaqiniso asanda kuphikiswa abameli bakaMonsanto enqatshwe ngokuphelele yijaji futhi enqatshwa yijaji lecala… ”kusho uMiller.
Inkantolo yokudluliswa kwamacala kufanele ihambisane nomonakalo owanikezwa yijaji, kubandakanya nomonakalo wokujeziswa, ngoba indlela uMonsanto aziphatha ngayo mayelana nesayensi nokuphepha kwemithi yokubulala ukhula ye-glyphosate "yayiyimbi," kusho uMiller.
Ubufakazi obethulwe ecaleni likaJohnson bukhombisa ukuthi uMonsanto ubambe iqhaza ekubhalweni komoya kwamaphepha esayensi ngenkathi yehluleka ukuhlola ngokwanele umuthi wokubulala ukhula we-glyphosate ngobungozi be-carcinogenicity. Le nkampani yabe isiqala ukuhlaselwa "okungakaze kube khona" ekwethembekeni kososayensi bomdlavuza bamazwe omhlaba ababeka i-glyphosate njenge-carcinogen yabantu ngo-2015, utshele iphaneli lezobulungiswa.
“Emonakalisweni yokujeziswa, njengoba uhlola ukwethembeka kweMonsanto kumele ubandakanye ingcebo yeMonsanto. Nomklomelo kumele wenele ukuluma, ”kusho uMiller. "Ngaphansi komthetho waseCalifornia ngaphandle uma kuguqula indlela yokuziphatha akuhambelani nenhloso yokulimala kwesijeziso."
Iphaneli yokudlulisa amacala inezinsuku ezingama-90 zokukhipha isinqumo.
I-Monsanto Roundup Trial Tracker I-B-cell non-Hodgkin lymphoma, Bayer, California, umdlavuza, inkantolo, EPA, glyphosate, zezempilo, ukhula, IARC, zomthetho, Monsanto, i-non-Hodgin lymphoma, izibulala-zinambuzane, RoundUp, isayensi, umbulali wokhula
Amaqembu Ezobuchwepheshe, Abezokwelapha Namapulazi Bacela Inkantolo Yokudlulisa Amacala ukuguqula Isinqumo Esimelene neMonsanto
Posted on September 4, 2019 by UCarey Gillam
Amaqembu amele izintshisekelo zepulazi, ezokwelapha kanye ne-biotechnology afake iziyalezo eNkantolo Yokudluliswa kwamacala yaseCalifornia, ehambisana neMonsanto ekuceleni inkantolo ukuthi iguqule isinqumo senkantolo eledlule esathola ukuthi i-glyphosate-herbicides kaMonsanto idala umdlavuza futhi yanquma ukuthi inkampani ichithe iminyaka ihlanganisa izingozi .
La maqembu anxusa inkantolo yokudlulisa amacala ukuthi iphose ukunqoba ijaji laseSan Francisco elinikeze umgcini wezinkundla zesikole uDewayne “Lee” Johnson ngo-Agasti ka-2018 noma lenze ukuba umthetho weMonsanto ukhokhe umonakalo wokujezisa uJohnson. Icala likaJohnson kwaba ngowokuqala ngokumelene neMonsanto ngenxa yezimangalo zokuthi ukhula lwayo lwe-glyphosate olususelwa ku-Roundup lungadala i-non-Hodgkin lymphoma.
UJohnson ungomunye wabamangali abangaphezu kuka-18,000 abenza izimangalo ezifanayo. Amacala athi uMonsanto wayazi ngocwaningo lwesayensi olukhombisa ukuhlangana phakathi kokubulala ukhula nomdlavuza kodwa kunokuba axwayise abathengi inkampani isebenze ukucindezela lolu cwaningo nokusebenzisa izincwadi zesayensi.
Ijaji ecaleni likaJohnson linqume ukuthi uMonsanto kufanele akhokhe amadola ayizigidi ezingama-289, kufaka phakathi u- $ 250 million kumonakalo wokujezisa. Ijaji lecala kuleli cala kamuva lanciphisa inani lokulimala kwesijeziso, lanciphisa umklomelo ophelele waba ngu- $ 78 million. Amanye amajaji amabili ezilingweni ezalandela ngaphezu kwezimangalo ezifanayo nabo bathole abamangali futhi bayalela umonakalo omkhulu wokujeziswa kweMonsanto.
IMonsanto yadlulisa icala isinqumo futhi UJohnson wadlulisa icala, efuna ukubuyiselwa imali eyi- $ 289 million ephelele. Ukuphikisana ngomlomo kulindeleke kule nkantolo yokudlulisa amacala lokhu kuwa nesinqumo esingavela enkantolo yokudlulisa amacala ngaphambi kokuphela konyaka.
Elinye lamaqembu afaka okufushane okusekela isikhundla sikaMonsanto yiGenentech Inc., inkampani yaseSan Francisco enokwakhiwa kwe-biotech enomlando wokwenza ucwaningo ngemithi yokwelapha umdlavuza. Ekudluliseni icala enkantolo, UGenentech uyaphikisana ukuthi inolwazi lobuchwepheshe "njengenkampani yesayensi" futhi ibona ukuthi isinqumo sikaJohnson siyisongo enqubekweni yesayensi. "Izinkantolo kumele ziqinisekise ukuthi isayensi isetshenziswa ngendlela efanele enkantolo ukuze izinto zithuthuke emakethe…" kusho umbiko kaGententech.
I-Genentech umemezele ngasekuqaleni konyaka isibuyekezo esisheshayo esivela ku-Food and Drug Administration sokwelashwa kwezidakamizwa kubantu abane-non-Hodgkin lymphoma.
Ekusekeleni isikhalazo sikaMonsanto, uGenentech wenanela izikhalazo zikaMonsanto zokuthi abameli bakaJohnson ababethulanga kahle ubufakazi besayensi: “UGenentech ubhala ukugqamisa ukubaluleka kokuhlolwa okufanele kobufakazi besazi sezinkampani ezinemikhiqizo emisha ngokwesayensi kanye nabathengi abathembele emisha yabo. ”
Le nkampani iphinde yasebenzisana neMonsanto odabeni lomonakalo wesijeziso, ithi izinkampani akumele zibhekane nomonakalo wesijeziso uma umkhiqizo wazo ubuyekezwe yi-ejensi yokulawula efana ne-Environmental Protection Agency (EPA) kwatholakala ukuthi ayinabungozi impilo yomuntu.
"Ukuvumela amajaji ukuba anikeze umonakalo wokujeziswa kwemikhiqizo ehlolwe ngokukhethekile futhi yamukelwa yi-ejensi yokulawula idala ingozi enkulu yokudideka ezinkampanini ezisebenza ngesayensi futhi kungavimbela inqubekela phambili yesayensi," kusho uGenentech kafushane. "Uma kuvunyelwe imiklomelo enjalo yokujeziswa, izinkampani zibhekana nengozi yokulimala kakhulu ngaphandle kokuba ziqagele izinqumo zokuphepha zabalawuli."
NgoLwesibili iCalifornia Farm Bureau Federation ifake isicelo ngamafuphi ukusekela iMonsanto. Ihhovisi lepulazi, elithi limele amalungu angama-36,000, lithe leli cala "libakhathaza kakhulu" abalimi nabafuyi bezolimo "abathembele kumathuluzi okuvikela izitshalo ukutshala ukudla nefayibha."
Noma isinqumo sikaJohnson singakuthinti ukulawulwa kwe-glyphosate herbicides, ihhovisi lepulazi liphikisa ngamafuphi ukuthi imboni yesaba imikhawulo kumakhemikhali. Iqembu lasepulazini libuye lathi “isinqumo senkantolo yokuqulwa kwecala asiwunaki umthetho wobumbano, kanye nomthetho wombuso…” ngoba uphikisana nokutholwa yi-EPA kokuthi i-glyphosate ayinakubanga umdlavuza.
Ngokwengeziwe, izinhlangano zaseCalifornia ezimele odokotela, odokotela bamazinyo nezibhedlela singene ngaphakathi egameni likaMonsanto ephikisa ngokuthi isinqumo sejaji ecaleni likaJohnson "sasingaphansi kokukhohliswa ngokomzwelo" futhi sasingasekelwe "ekuvumelaneni kwesayensi."
“Impendulo yombuzo wesayensi oyinkimbinkimbi obekumele ixazululwe yijaji kuleli cala bekufanele isuselwe ebufakazini besayensi obamukelekayo nasekubonisaneni okunesayensi okuqinile, hhayi ukukhetha kwenqubomgomo yejaji. Okubi kakhulu wukuthi kunesizathu sokusola ukuhlaziywa kwejaji kususelwa ekucabangeni nasekuzizweleni, ”kusho ososeshini ngamafuphi.
Ummeli kaJohnson, uMike Miller, uthe uzizwa "emuhle impela" ngamathuba okunqoba enkantolo yokudluliswa kwamacala futhi uchaze isifinyezo esivela eCalifornia Medical Association "njengesifinyezo esifanayo abasifaka ngokumelene nazo zonke izisulu zobudedengu."
Isivivinyo SaseMissouri Singaqhubeka
Ngesenzo esihlukile eMissouri, inkantolo ephakeme yombuso ngoLwesibili ithe Isivivinyo siqala ukuqala ngomhlaka-15 Okthoba edolobheni laseSt. Louis kungaqhubeka njengoba kuhlelwe egameni lommangali uWalter Winston. Abanye abamangali abebejoyine isikhalazo sikaWinston ngeMonsanto kulindeleke ukuthi banqunywe futhi / noma baphuze amacala abo, ngokwesinqumo yiNkantolo Ephakeme YaseMissouri. UMonsanto wayecele inkantolo ephakeme ukuthi ivimbele ukuqulwa kwecala ngenxa yokuthi abamangali abaningana abahlali kule ndawo.
INkantolo Ephakeme iyalele iJaji iSt. Louis City, uMichael Mullen, ukuthi "angabe esazithatha ezinye izinyathelo" ngalesi sikhathi emacaleni abamangali abayi-13.
IMonsanto yatholwa yiBayer AG ngoJuni ka-2018, kanti amanani entengo kaBayer ehla kakhulu kulandela isinqumo sikaJohnson futhi ahlala ecindezelekile. Abatshalizimali bacindezela ukuthi kuxazululwe umhlaba wonke ukuze kuphele icala.
I-Monsanto Roundup Trial Tracker ezolimo, isikhalazo, Bayer, umdlavuza, inkantolo, imvelo, EPA, ukulima, Ukudla, glyphosate, IARC, Monsanto, i-non-Hodgkin lymphoma, RoundUp, isayensi, ubuchwepheshe, Isivivinyo
Indaba Eyiqiniso - USolwazi ukwala ukulungisa amaphutha ku-New Scientific Paper Ukuthola Izinkinga ngeGlyphosate
Posted on June 5, 2019 by UCarey Gillam
(KUbuyekezwe ngoJuni 5 ngamazwana avela kuScientific Reports)
Ababhali bencwadi ye- iphepha elisanda kushicilelwa Ukuhlola imithelela yokuchayeka kwi-herbicide esetshenziswa kakhulu emhlabeni kumemezele izindaba ezishaqisayo.
The iqembu elivela eWashington State IYunivesithi ithole ukuthi inzalo yamagundane evezwe kumakhemikhali i-glyphosate ithuthukise i-prostate, izifo zezinso kanye nama-ovari, ukukhuluphala ngokweqile nokuzalwa okungajwayelekile. Okutholakele, kushicilelwe ngo-Ephreli kumagazini wesayensi Imibiko yeSayensi, Kwengezwe empikiswaneni yomhlaba mayelana nokuphepha kwe-glyphosate ne-Roundup kaMonsanto nabanye ababulali bokhula abasuselwa e-glyphosate.
Kodwa mhlawumbe okumangalisa kakhulu kunalezo zindaba, iqembu labacwaningi liphinde lasho ephepheni labo ukuthi i-International Agency for Research on Cancer (IARC), ingcweti yesayensi engungqondongqondo yeWorld Health Organisation, "ikuhoxisile" ukutholwa kwayo ukuthi i-glyphosate ibingumuntu umdlavuza.
Iphutha lingenye yamaphepha abikwe kubalobi esikhathini esingaphezu kwenyanga edlule okusamele kulungiswe. Kepha akekho, mhlawumbe, ogqame kakhulu kunaleyo emayelana ne-IARC.
I-IARC ibikhiphile iphepha elide ngo-2015 okuphethe ngokuhlukanisa i-glyphosate njenge-2A carcinogen yomuntu. Lokho kuhlukaniswa kwe-IARC kwaqubula izinkulungwane zamacala abhekiswe kuMonsanto, umethuli wesikhathi eside weRoundup namanye ama-herbicides e-glyphosate futhi kwabhebhezela impikiswano emhlabeni wonke. Ukuhlukaniswa kwe-IARC kuphinde kwasiza ukukhuthaza amazwe amaningi aseYurophu ukuthi aqale ukuhambisa ukukhawulela noma ukuvimbela ukusetshenziswa kwe-glyphosate. Amadolobha, izifunda zezikole nabathengisi kulo lonke elase-United States nabo bayekile ukusebenzisa noma ukuthengisa imikhiqizo ye-glyphosate. Umnikazi waseMonsanto waseGerman uBayer AG ulahlekelwe ngamaphesenti angama-40 wenani lamasheya akhe ngenxa yokukhathazeka okuqhubekayo mayelana nokubulawa kwe-Monsanto's glyphosate herbicides.
Kepha ngokusho kwethimba le-WSU, ukuhlukaniswa kwe-IARC okudale konke kwahoxiswa ngo-2016. Babhala:
“NgoMashi 2015 i-International Agency of Research on Cancer yahlukanisa i-glyphosate njenge-carcinogen ka-Grade 2a ngokususelwa ekudlangaleni kwezimila zesibindi nezinso ezifundweni ezingapheli zokudla. Ngokushesha ngemuva kwalokho, lesi sitatimende sahoxiswa ngo-2016. "
Ukuhoxiswa kabusha yi-IARC kokutholakele kwayo kungaba yinto ebaluleke kakhulu. Impela, iMonsanto e-2015 yafuna ukuhoxa kodwa i-IARC ivikele umsebenzi wayo, njengososayensi abaningi abazimele abavela emazweni amaningi. Futhi okuphawuleka, i-IARC ayikaze ihoxise ukutholakala kwayo kwe-glyphosate njenge-2A engaba nomdlavuza.
"Ukuhlelwa akukashintshwa futhi kusasebenza," kusho okhulumela i-IARC uVeronique Terrasse.
Ithimba labacwaningi laseWashington State beliholwa ngu UMichael Skinner, uprofesa weWSU School of Biological Sciences. Kubonakala sengathi iphutha kuzoba lula ukulilungisa. Kodwa ngesikhathi ethintwa ngaleli phutha, uSkinner uthe akazimisele ngokulungisa lesi sitatimende ngoba asikho isidingo sokulungiswa. Uthe utshele ososayensi abaphakamise lolu daba naye ukuthi babhalele umhleli wephephabhuku.
"Incazelo yeRetract ifaka phakathi" Ukudweba noma ukubuyiselwa emuva noma ukubuyela emuva "noma" ukuhoxisa noma ukubuyela emuva "noma" ukucabanga kabusha noma ukubuyela emuva ", yingakho leli gama lisetshenziswe kulo mongo," kusho uSkinner ku-imeyili impendulo.
Imibiko Yesayensi iyingxenye yeMvelo, iphephabhuku lamazwe omhlaba wonke elizibiza ngokuthi "lishicilela ucwaningo oluhle kakhulu olubukezwa kontanga kuyo yonke imikhakha yesayensi nobuchwepheshe ..."
Okhulumela i- Imibiko Yesayensi, wathi: "Lapho kukhona noma yiziphi izinkinga eziphakanyiswayo nge Imibiko yeSayensi ngamaphepha esiwashicilele, siwaphenya ngokucophelela futhi sizothatha izinyathelo lapho kufanele khona. ”
Uveze lokho Imibiko yeSayensi uyimagazini eku-inthanethi, evulekile ukufinyelela “kumndeni wamajenali Wocwaningo Lwemvelo” kodwa ihlelwe ngokuhlelekile yiNdalo.
Ososayensi abaningana abangaphandle bathole amanye amaphutha ayiqiniso ephepheni, futhi bathi basabisa ngokucekela phansi ukwethembeka kokutholakele sekukonke.
"Lokhu kufanele kuthathwe ukubuyekezwa kontanga," kusho UChuck Benbrook, isazi sezomnotho kwezolimo kanye nochwepheshe we-glyphosate ocwaningo lwakhe lwesayensi olukhonjiswe ngokungalungile yithimba leSkinner ephepheni labo. UBenbrook uxhumane noSkinner ngo-Ephreli ngokushesha ngemuva kokushicilelwa kwephepha ebeka amaphutha amaningi adinga ukulungiswa. UBenbrook uqaphele ukuthi zonke izinkinga azaziyo zazisethulweni sephepha futhi zazingahlangene neziphetho zesayensi.
“Kungani engazange asheshe alungise amaphutha ayiqiniso… kunzima ukuwaqonda,” kusho uBenbrook.
Phakathi kwamanye amaphutha ayiqiniso:
* Leli phepha lathi i-glyphosate ibala cishe amaphesenti angama-72 okusetshenziswa kwezibulala-zinambuzane emhlabeni jikelele, icaphuna ucwaningo lukaBenbrook. Ucwaningo lukaBenbrook alukusho lokho, kepha luthi amaphesenti angama-72 e-glyphosate afuthwe emhlabeni wonke asetshenzisiwe eminyakeni eyishumi edlule.
* Iphepha leSkinner lithi ukuhlukaniswa kwe-IARC kwe-glyphosate kwakususelwa ekusakazekeni kwezimila zesibindi nezinso ezifundweni zokondla ezingalapheki. Eqinisweni, ukuhlukaniswa kwe-IARC, njengoba kuchazwe ephepheni le-IARC, kusho ukuthi ukuhlukaniswa kwakususelwa emininingwaneni evela ezifundweni zezilwane, izifundo ze-epidemiology, kanye "nobufakazi obuqinile" bezinqubo zesenzo se-genotoxic.
* Futhi, leli phepha lakhomba embhalweni waphansi iphepha eliphikisana nokutholwa kwe-IARC kwe-glyphosate njenge-carcinogen wadalulwa cishe eminyakeni emibili eyedlule njengomsebenzi obhalwe ghost ososayensi baseMonsanto. Iphepha likaSkinner alikuphawulanga lokho leli phepha, enesihloko esithi "Ukubuyekezwa kwePhaneli yochwepheshe beGenotoxicity: isisindo sokuhlolwa kobufakazi be-genotoxicity ye-glyphosate, ukwakheka okususelwa ku-glyphosate, ne-aminomethylphosphonic acid," bekuyinkinga kakhulu ngokungabi bikho kokudalulwa kokubandakanyeka kukaMonsanto kangangokuba iphephabhuku elalikushicilela - Critical Reviews in Toxicology - ukhiphe i- “Ukuzwakalisa ukukhathazeka"Futhi a isitatimende sokulungisa.
Ucwaningo lukaSkinner lwalusekelwa yisibonelelo esivela kuJohn Templeton Foundation. Yena nozakwabo baveza amagundane akhulelwe ku-glyphosate phakathi kwezinsuku zabo eziyisishiyagalombili nezili-14 bezithwele. Umthamo, abathi uyingxenye yenani okulindeleke ukuthi ungakhombisi imiphumela emibi, awuzange uveze imiphumela emibi ebonakala kubazali noma esizukulwaneni sokuqala senzalo. Kodwa abacwaningi babone ukwanda okuphawulekayo “kwezifo eziningana ezithinta isizukulwane sesibili nesesithathu,” ngokusho kuka ukukhululwa kwezindaba ukugqugquzela isifundo.
Ucwaningo seluthole ukunakwa impela. Imithombo yezindaba eminingana ibike ngalolu cwaningo, icaphuna uSkinner. IBayer AG, inkampani yaseJalimane eyathenga iMonsanto ngonyaka odlule, ithe isifundo sikaSkinner asithembekile. Kepha uSkinner uvikele ukunemba zocwaningo, ecaphuna iqiniso lokuthi kubuyekezwe ontanga futhi kwashicilelwa kumagazini wesayensi ogunyaziwe.
(Isigaba siqale ukuvela ngomhlaka- I-EcoWatch.)
Ukudla Okucatshangwayo, izibulala-zinambuzane Bayer, umdlavuza, imvelo, EPA, Ukudla, glyphosate, zezempilo, IARC, iphephandaba, UMichael Skinner, Monsanto, isayensi, Imibiko yeSayensi, cwaningo, I-Washington State University